အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: ရေနွေးကြမ်း သောက်ရအောင်
29 Responses to “ရေနွေးကြမ်း သောက်ရအောင်”
လဘက်ရာဇ၀င်လေးက စိတ်ဝင်စားစရာလေးဘဲနော်။ ပြီးတော့ ရောဂါပေါင်းစုံကိုလဲ ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ ရေနွေးကြမ်း(လဘက်ရေ)ကြိုက်တာနဲ့ အံကိုက်ဖြစ်နေတယ်။ ဒါနဲ့ အမ။ လဘက်ရွက်အစိမ်းသက်သက်ကို ဒီအတိုင်း ကျိုသောက်ရင်ကော အရသာကောင်းလားမသိဘူး။ မသောက်ဖူးဘူး။
ရေနွေးကြမ်းကို ရေအေးအေးလောက် မကြိုက်တော့ သိပ်မသောက်ဖြစ်ဘူးအမရယ်
ဒါမယ့် ခုကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းတယ်ဆိုတော့ သောက်တော့မယ်နော်
ကြည်နူးစရာ လက်ဖက်စိုက်ခင်းလေးက ကြည့်နေရင်းနဲ့အဲနေရာလေးကို အလည်သွားချင်စိတ် ပေါ်လာတယ်
လက်ဖက်ကိုကြိုက်တယ်ခင်ဗျ... ရေနွေးကြမ်းရော... လက်ဖက်နှပ်ကောပေါ့... :D
လက်ဖက်စိုက်ခင်းထဲ သွားလည်ခဲ့စဉ်က စိတ်ကြည်နူးခဲ့လို ဘလောက်ဂ်မှာ တိုင်တည်ပုံအဖြစ်တင် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်၊ အနောက်စာစောင်တစ်ခုမှာ လက်ဖတ်အစ ဥရောပအဆုံး အာရှအလယ်ပိုင်းကဆိုတယ် ပြီးမှာ တရုတ် သီရီလင်္ကာ အရှေ့နှင့် အရှေ့တောင် အာရှကို ရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်။
လက်ဖက်စိုလေး ခပ်သောက်ရင် ပိုကြိုက်...။
အခုဖတ်လိုက်ရတော့ ကျန်းမာရေးအတွက် ဆေးတစ်ခွက်မှန်း ပိုတောင်သိသွားရပြီ..။
လ္ဘက်ရည်ကြမ်း တအိုးကုန်အောင် သောက်သွားတယ် မချောရေ...
ရေနွေးကြမ်းကိုတော့ အမြဲတမ်း သောက်ဖြစ်တယ်ဗျ.. ငယ်ငယ်လေးကတည်း အဖေနဲ့ အတူတူ သောက်ရင်းနဲ့ အခုလည်း.. အမြဲသောက်ဖြစ်ပါတယ်.. ကျန်းမာရေးအတွက်ဆေးတစ်ခွက် အဖြစ် သိလိုက်ရတော့ ပိုပြီးတော့ သောက်လိုက်အုံးမယ်ဗျာ.. ကျေးဇူးပဲနော်. ရေနွေးကြမ်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေ သိလိုက်ရလို့...
ငါ့ အစ်မကတော့ဟေ သူကြသောက်ပြီး အနော့ကြ မတိုက်ဘူး ။ နေပေါ့ post ထဲကပဲ သောက်သွားတယ် ဟီး
ရေနွေးကြမ်း အရမ်းကြိုက်လို့သောက်ပေမယ့် ဒီလို အကျိုးရှိမှန်း မသိဘူး အခုတော့ ပိုသောက်ဖြစ်တော့မှာပေါ့ ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ဗျာ ကျန်းမာရေးသုတတွေရလို့ နောက်လည်း ရေးပေးပါ မျှော်နေမယ်
မချောရေ နဂိုထဲက လက်ဖက်ရည်ကြမ်းကို အရမ်းကြိုက်တာ
ခုလဲ ရုံးမှာရော အိမ်မှာရော သောက်တယ်..
ခုလို အကျိုးလေးတွေသိရတော့ ပိုပြီး နှစ်သက်စိတ်ဖြစ်မိတယ်..
သိဘူး...လူကြီးတွေမှ ရေနွေးသောက်ကြတာ ထင်လို့
ချောရဲ့ ပိုစ်က ဓါတ်ပုံလေးတွေက တကယ့်ကို စိမ်းစိုလန်းဆန်းနေတာပဲ..။ မျက်လုံးကို အေးသွားတာပဲ..။
ကျေးဇူးပါ ရေနွေးကြမ်းသောက်တာကောင်းကျိုးတွေများတာသိပေမဲ့ ခုလောက်တော့စုံစုံလင်လင်မသိခဲ့ပါဖူး။
ဟုတ်တယ် တရုပ်ပြည်ကနေ လက်ဖက်ခြောက်ရွက်က ဂျပန်ကိုရောက်လာတာတဲ့..။
အရင်တုန်းကတည်းကသောက်ခဲ့တာ။ အခုလည်းသောက်တယ်။ နောက်လည်းသောက်ဦးမှာ။ :)
အခုချက်ခြင်း ကို ရေနွေးဖောက်ပြီး သောက်လိုက်မဟယ် တခရား ကုန်ရော
ရေနွေးကြမ်းတော့အခုတလောမသောက်ဖြစ်ဘူး....
ကျေးဇူးနော် ....မမချော ကျမ်းမာပါစေ
ရေနွေးကြမ်းတော့ လွှတ်ကြိုက် ခုလို အကျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ ပိုကြိုက်သွားပြီ
Tea Leafs is very good for health. But, be CAREFUL that don't eat and drink "Dye Tea Leafs ". Bec Dye Tea Leafs can cause Liver cancer. Take care it.
People ate and drank Tea Leafs to be healthy. But, People die bec of 'Dye Tea Leafs'. I got that experienc in my family.
So, eat and drink "Good Tea Leafs". Do NOT eat and drink "Dye Tea Leafs".
ညီမလေး လ္ဘက်သာနဲ့ သာအသက်ရှင်လာတာ
ဒါပေမဲ့ လ္ဘက်ရဲ့ကောင်းကျိုးကိုအဲဒီလောက်ထိမသိပါဘူး
အခုလို ဖတ်ခွင့်ရတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးပဲ အမ ..
.........အားပေးနေမယ်နော် အမ ..........
လက်ဖက်ရဲ့ကောင်းကျိုးတွေလာဖတ်ပါတယ် မချော ကျေးဇူးပါ..
ဒီနိင်ငံလည်း ရေနွေကြမ်းဘူး လေးတွေ အသောက်များတယ်။ ကျွန်တော်တို့တောင် နေ့လည်ဘက်တွေ အဲဒီဘူးတွေပဲ ဝယ်သောက်ဖြစ်တယ်။ ရာသီဥတု ပူနေချိန် ရေနွေးကြမ်း အေးအေးလေး သောက်လိုက်ရတာ တကယ်ရေငတ်ပြေတယ်။
ဒီလောက်အထိ ဆေးဘက်ဝင်တာတော့ ခုမှ သိတာပါ။ ကျေးဇူးပါ အစ်မ...။
လက်ဘက် ဆေးဘက်ဝင်တာတော့ သိတယ် မရေ..။
ဝိတ်ကျချင်ရင် ရေနွေးကြမ်း သောက်ကြတယ် ဒီမှာတော့..
ဝမ်းမှန်တယ်။ ဝိတ်ချတဲ့ ရေနွေးကြမ်းဗူးတွေတောင် ရောင်းတယ် မရေ..